Abu Mazen oo Midowga Yurub ka codsan doona aqoonsiga Dawladda Falastiin – Kasmo Newspaper
Abu Mazen oo Midowga Yurub ka codsan doona aqoonsiga Dawladda Falastiin
Updated - January 22, 2018 12:30 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maamulka Falastiin, Maxamuud Cabbaas (Abu Mazen) ayaa inta uu ku jiro booqashadiisa Brussels ka codsan doona Midowga Yurub in ay si rasmi ah u aqoonsadaan Dawladda Falastiin.
Sidaasna waxaa Wakaaladda wararka Fransiiska AFP u sheegay, maalintii Axadda, Wasiirka Arrimaha Dibadda Falastiin, Riyad Al- Maliki.
Abu Mazen, ayuu yiri ‘wuxuu Wasiirrada Arrimaha Dibadda Yurub ka rajaynayaa in ay si wadajir ah u aqoonsadaan Dawladda Falastiin’ taas oo jawaab u noqon karta go’aankii Maraykanka ee Qudus.
Wareysi Al-Maliki siiyay warbaahin kala duwan oo Caalami ah wuxuu ku sheegay ‘in ay tahay xilli laga gudbayo oo muhiim ah’.
Abu Mazen wuxuu maanta la kulmi doonaa madaxa Diboloaasiyadda Yurub, Federica Mogherini iyo 28ka Wasiir ee Arrimaha Dibadda Yurub, gabagabada kulankooda billaha ah. Ra’iisal Wasaaraha Israel,Benjamin Netanyahu, wuxuu kulankaan oo kale la qaatay 11kii Disembar 2017kii.
‘Haddii Yurub doonayso in ay kaalin ku yeelato, waa in si sinnaan ah loola dhaqmo dhinacyada, taasina waa in ay ka bilaabato aqoonsiga Daladda Falastiin’ ayuu sheegay Al-Maliki.
Falastiin ayaa doonaysa in ay ka gudubto geeddisocod Maraykanku hor boodayo, una gudubto mid Caalami ah, taas oo Midowga Yurub qudhiisu danaynayo, sida uu qirayo Hugh Lovatt oo ah isu-duwaha mashruuca Israel-Falastiin ee European Council on Foreign Relations.
Safarka Abu Mazen ee Brussels ayaa ku soo beegmaya xilli Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka, Mike Pence booqanayo Israel, lugta uu ku marayo Bariga Dhexe, iyada oo caradii Carabta ee go’aankii Qudus wali taagantahay.